सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स : कम्पनी विश्लेषण (बुधवार, २९ फागुन २०७५)
कम्पनीले चालू आव २०७५/७६ को दोस्रो त्रैमासमा रू. ८ करोड ९८ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा २ प्रतिशत बढी हो । कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ८६ करोड ५९ लाख छ । बीमा समितिले तोकेको चुक्तापूँजी पुगेको छैन । निर्जीवन बीमा कम्पनीले चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । अपुगरू. १३ करोड ४० लाखबराबरको रकम बोनस शेयर जारी गरेर पु¥याउने कम्पनीले बताएको छ । रिजर्भ कोषमा रू. २३ करोड १४ लाख छुट्याएको छ । यो गत आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा १ सय ९२ प्रतिशत बढी हो । बीमा कोषमा रू. ५९ करोड ९३ लाख जम्मा भएको छ । यो गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ३१ प्रतिशत बढी हो । कम्पनीले ७१ ओटा शाखा कार्यालयबाट बीमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
2019-03-13 - 48 view(s) - abhiyan